17 Zvino mugove+ uyu wakava wedzinza raManase,+ nokuti akanga ari dangwe raJosefa,+ waMakiri+ dangwe raManase, baba vaGiriyedhi,+ nokuti aiva murume wehondo;+ uye Giriyedhi+ neBhashani zvakava zvake. 2 Pakavawo nomugove wevanakomana vaManase vakanga vasara maererano nemhuri dzavo, wevanakomana vaAbhi-ezeri+ nevanakomana vaHereki+ nevanakomana vaAsrieri nevanakomana vaShekemu+ nevanakomana vaHeferi nevanakomana vaShemidha.+ Ava ndivo vaiva vanakomana vaManase mwanakomana waJosefa, vanhurume vacho maererano nemhuri dzavo. 3 Asi Zerofehadhi+ mwanakomana waHeferi, mwanakomana waGiriyedhi, mwanakomana waMakiri, mwanakomana waManase, haana kuva nevanakomana, asi vanasikana, uye vanasikana vake vainzi: Mahra naNoa, Hogra, Mirika naTiza.+ 4 Naizvozvo vakauya pamberi pomupristi Eriyezari+ naJoshua mwanakomana waNuni nemachinda, vachiti: “Jehovha ndiye akarayira Mosesi kuti atipe nhaka pakati pehama dzedu.”+ Naizvozvo akavapa nhaka, pakati pehama dzababa vavo,+ arayirwa naJehovha. 5 Kwaiva nemigove gumi yakapiwa Manase tisingabatanidzi nyika yeGiriyedhi neBhashani, yaiva mhiri kwaJodhani;+ 6 nokuti vanasikana vaManase vakava nenhaka pakati pevanakomana vake; uye nyika yeGiriyedhi yakava yevanakomana vaManase vakanga vasara. 7 Muganhu waManase waibvira kwaAsheri kusvikira kuMikmetati,+ iri pakatarisana neShekemu,+ uye muganhu wacho wakaenda kurudyi kuvagari vomuEni-Tapua. 8 Nyika yeTapua+ yakava yaManase, asi Tapua yaiva pamuganhu waManase yakanga iri yevanakomana vaEfremu. 9 Muganhu wacho wakaenda kumupata une rukova weKana, nechokumaodzanyemba kumupata une rukova wemaguta+ aya aEfremu ari pakati pemaguta aManase, uye muganhu waManase waiva kuchamhembe kwomupata une rukova, ukagumira kugungwa.+ 10 Kumaodzanyemba kwaiva kwaEfremu, kuchamhembe kuri kwaManase, gungwa rakava muganhu+ wake; uye kuchamhembe vaisvika kwaAsheri, kumabvazuva kuri kwaIsakari. 11 Pakati paIsakari nepakati paAsheri, Manase+ akava neBheti-sheyani+ nemataundi aiva pasi paro neIbreyamu+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vomuDhori+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vomuEndori+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vomuTaanaki+ nemataundi aiva pasi paro nevagari vomuMegidho+ nemataundi aiva pasi paro, nzvimbo nhatu dzakakwirira. 12 Vanakomana vaManase havana kukwanisa kuita kuti maguta aya ave avo,+ asi vaKenani vakaramba vachigara munyika iyi.+ 13 Vanakomana vaIsraeri pavakanga vava nesimba,+ vakashandisa vaKenani basa rokumanikidzirwa,+ asi havana kuvadzinga zvachose.+ 14 Vanakomana vaJosefa vakataura naJoshua, vachiti: “Matipirei mugove mumwe chete+ nechikamu chimwe chete kuti ive nhaka yedu, isu zvatiri vanhu vazhinji nokuti Jehovha atikomborera kusvikira zvino?”+ 15 Joshua akati kwavari: “Kana muri vanhu vazhinji, endai kusango, muriteme imomo munyika yevaPerizi+ nevaRefaimu,+ nokuti nzvimbo ine makomo+ yaEfremu yava duku kwazvo nokuda kwenyu.” 16 Vanakomana vaJosefa vakabva vati: “Nzvimbo ine makomo haitikwaniri, uye kune ngoro dzehondo+ dzine majeko esimbi pakati pevaKenani vose vari kugara munyika iri mubani, vose vaya vari muBheti-sheyani+ nemataundi ari pasi paro nevaya vari mubani reJezreeri.”+ 17 Naizvozvo Joshua akati kuimba yaJosefa, kuna Efremu naManase: “Muri vanhu vakawanda, uye mune simba+ guru. Hamufaniri kuwana mugove mumwe chete,+ 18 asi nzvimbo ine makomo ngaive yenyu.+ Muiteme, nokuti isango, uye ndiyo ichava muganhu wenyu. Nokuti munofanira kudzinga vaKenani, kunyange vaine ngoro dzehondo dzine majeko esimbi uye vakasimba.”+